November 30, 2020 - Achawlaymyar
နဖူးကို နမ်းရခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ် (၅)မျိုး……
နဖူးကို နမ္းရျခင္းရဲ႕ အဓိပၸါယ္ (၅)မ်ိဳး အနမ္းကို အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားေတြက စတင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးက အနမ္းကုိ လက္ခံတုန္႔ျပန္တဲ့ ဘက္မွာပဲ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ခ်စ္သူေကာင္ေလးက ခ်စ္သူမိန္းကေလးကို နဖူးကို နမ္းတဲ့အခါ ဘယ္လုိအဓိပၸါယ္ေတြ ရွိသလဲဆုိတာကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ (၁) ေလးစားျမတ္ႏုိးမႈ သိပ္ကို ေလးစားျမတ္ႏုိးရတဲ့ ခ်စ္သူဆုိရင္ အမ်ိဳးသားေတြက နဖူးကို ၾကင္ၾကင္နာနာ နမ္းေလ့ရွိပါတယ္။ အနမ္းခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ ကိုယ္က်င့္သိကၡာပုိင္းနဲ႔ အလြန္လွပတဲ့ ႐ုပ္အဆင္း၊ ထက္ျမတ္တဲ့ ဉာဏ္ပညာကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ သေဘာပါ။ (၂) ဂ႐ုစိုက္တန္ဖုိးထားမႈ သူဟာ သင့္ကုိ အၿမဲတန္ဖုိးထား ဂ႐ုစုိက္ေနပါတယ္ဆုိတဲ့ သက္ေသလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ နဖူးကုိ နမ္းတဲ့အနမ္းမွာ သံေယာဇဥ္ေတြ၊ အၾကင္နာတရားေတြ စာနာေထာက္ထားမႈေတြ၊ နားလည္လက္ခံမႈေတြ အမ်ားႀကီးကို စုေပါင္း … Read more
တကယ္ခ်စ္တဲ့ ေကာင္ေလးေတြဆိုတာ မအားတာကိုအေၾကာင္းျပတတ္သူေတြ မဟုတ္ပါ…..
တကယ္ခ်စ္တဲ့ ေကာင္ေလးေတြဆိုတာ မအားတာကိုအေၾကာင္းျပတတ္သူေတြ မဟုတ္ပါ ဆက္သြယ္မႈဆိုတာ ခ်စ္သူတစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးၾကားမွာ အေရးၾကီးဆံုးအရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ လူခ်င္းေတြ႕တာ၊ ဖုန္းဆက္တာ၊ စာပို႕တာ၊ Online ကေန chatting လုပ္တာေတြ အားလံုးဟာ ဆက္သြယ္တာပါပဲ။ ဒီလိုဆက္သြယ္မႈျပဳလုပ္ရတာဟာလည္း တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္လြမး္လို႔၊ သတိရလို႔၊ ခ်စ္လို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေကာင္ေလးေတြဟာ မအားတာကိုအေၾကာငး္ျပျပီး ခ်စ္သူကို တစ္ေနကုန္တစ္ေနခမ္း၊ ႏွစ္ရက္သံုးရက္ၾကာေအာင္အထိ ပစ္ထားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ခ်စ္တဲ့ ေကာင္ေလးေတြကေတာ့ မအားတာကို အေၾကာင္းျပမယ့္ သူေတြမဟုတ္ပါဘူး။ (၁) အသံေလးမၾကားရရင္ မေနႏိုင္ဘူး တကယ္ခ်စ္တဲ့ ေကာင္ေလးေတြဟာ သင့္ကိုအခ်ိန္တိုင္းျမင္ခ်င္ေတြ႕ခ်င္ေနတဲ့သူေတြပါ။ တစ္ခါတေလ အလုပ္ေတြအရမး္ရႈပ္လို႔ ဒါမွမဟုတ္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သင္နဲ႔ေဝးေနရင္ေတာင္ သင့္အသံေလးမၾကားရရင္ မေနႏို္င္တဲ့သူပါ။ ဒါေၾကာင့္ သူဘယ္ေလာက္မအားေနပါေစ၊ သင့္ကိုရေအာင္ ဆက္သြယ္မယ့္သူျဖစ္ပါတယ္။ (၂) သတိရတယ္ တကယ္ခ်စ္တဲ့ေကာင္ေလးေတြဟာ … Read more
တနင်္ဂနွေသားသမီး ရပ်ဝေးခရီးကိစ္စ နိူင်ငံရပ်ခြားကိစ္စများဆောင်ရွက်ထားပါကအထူးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည် ပွဲစားလုပ်ငန်းလုပ်သူများအကျိူးအမြတ်ကြီး ကြီးရရှိပါလိမ့်မည် မြေကိစ္စများအကျိူးအမြတ်ရတတ်သလို အမွေအနှစ်ဆိုင်ရာကိစ္စများအထူးအဆင်ပြေပါလိမ့်မည် ကျန်းမာရေးမကောင်းသူများဆေးကောင်းဝါးကောင်းတွေ့မည် အချစ်ရေးတွင်ချစ်ရသူထံမှချစ်အဖြေရရှိပါမည် ထီ69ပါသောထီကိုထိုးပါ ယတြာ နိူ့ထမင်းကိုနေအိမ်ဘုရားတွင်လှုဒါန်းပေးပါ တနင်္လာသားသမီး မိမိအတွက်လုပ်ငန်းအခွင့်အလန်းကောင်းများကြုံရမည့်ကာလပါ မိမိဘက်ကသာရရှိလာသောအခွင့်အရေးကို အမိအရလက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြုပြီး အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားသွားဖို့လိုပါသည် ပစ္စည်းပျောက်ငွေပျောက်စာရင်းဇယားမှားခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါသည် ဘာပဲလုပ်လုပ်အယုံမလွယ်ပါနှင့် သတိထား၍အလုပ်လုပ်ပါ ခြေထောက်မတော်တဆထိခိုက်မိတတ်ပါသည် အချစ်ရေးတွင်ကိုယ်ချစ်နေတာကတစ်ယောက်ကိုယ့်ပြန်ချစ်နေတာကတစ်ယောက်ဖြစ်နေလိမ့်မည် ထီ85ပါသောထီထိုးပါ ယတြာ လူသွားလမ်းချိူင့်တွေခင်းဖို့ပေးပါ အင်္ဂါသားသမီး စိတ်အလွန်ရှုပ်ထွေးနေရတတ်သောကာလပါ အာရုံကြောအားနည်းခြင်း သတိမကြာခဏမေ့တတ်ခြင်းများဖြစ်တတ်ပါသည် ကျန်းမာရေးအထူးဂရုပြုရမည့်ကာလပါ ခရီးတစ်ခုထွက်ရမည်ကောင်းသောခရီးပါ ခရီးထွက်ရင်းမိမိအတွက်အကျိူးအမြတ်ရနိူင်သောအခွင့်အလန်းကောင်းများနှင့်ကြုံရပါလိမ့်မည် ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးကံအလွန်စန်းပွင့်နေပါမည် ထီ 90ပါသောထီကိုထိုးပါ ယတြာ နေအိမ်ဘုရားတွင်ရွှေရင်အေးကပ်လှုပေးပါ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီး ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ရပ်များကြုံရတတ်သောကာလပါ အံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်ရပ်တွေကြုံရတတ်ပါတယ် ဂမ္ဘီရပစ္စည်းတွေလည်းဝင်ရောက်လာတတ်ပါတယ် အလုပ်အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စများအတွက်စကားပြောဆိုမူများအောင်မြင်ပါလိမ့်မည် အလုပ်လျှောက်ထားသူများအလုပ်အကိုင်ရရှိပါလိမ့်မည် အစပိုင်းမှလစာနည်းပေမယ့်ရေရှည်မှာလစာဝင်ငွေကောင်းလာပါလိမ့်မည် ဒူးအဆစ်အမြစ်တွေညောင်ညာပြီးမလှုပ်ချင်မကိုင်ချင်ဖြစ်နေပါလိမ့်မည် ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးကံအားနည်းနေပါသေးတယ် မိမိရဲ့အချစ်အပေါ်မယုံကြည်ခြင်းခံနေရပါလိမ့်မည် ထီ၉၁ပါသောထီထိုးပါ ယတြာ ဂျင်းတက်တစ်တက်ပေါ်မှာအမွှေးတိုင်တစ်တိုင်စိုက်ပြီးအိမ်ရှေ့အဝင်ဝမှာထွန်းပေးပါ ကြာသာပတေးသားသမီး ပညာရေးကိစ္စသင်တန်းကိစ္စများတွင်အနှောင့်အယှက်အနည်းငယ်ကြုံ ပြီးမှသာအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မည် အရှေ့တောင်အရပ်မှလက်ဆောင်ပစ္စည်းကောင်းရရှိမည် … Read more
ခ်စ္သူျဖစ္ေနေစဦးေတာ့။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အဆင္မေျပ၊ ျငင္းခုန္ရန္ျဖစ္ရတာ၊ ဘာမဟုတ္တာေလးေတြနဲ႔ သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္မႈကိစၥေတြ ခဏခဏ ေျဖရွင္းရတယ္ဆိုရင္ သင္ဟာ သင့္အခ်စ္ေရးကို စိတ္ကုန္လာမွာပါ။ အဲ့ဒီလိုမွ မဟုတ္ပဲ သင့္အခ်စ္ေရးအတြက္ သင္ဟာ သူ႔ကိုသာ လက္တြဲဖို႔ေတာင္ ေသခ်ာေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဒီလိုအခ်က္ကေလးေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ၁။ ႏွစ္ဦးသားအႀကိဳက္တူတာေလးေတြ ေဝမွ်တတ္ၾကတယ္။ ကိုယ္ဝါသနာပါတဲ့ အားကစား၊ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့သီခ်င္းအမ်ိဳးအစား ကိုယ္ဖတ္တဲ့စာအုပ္မ်ိဳးစတာေတြကို သူနဲ႔အတူ အၿမဲေဝမွ်တတ္တယ္။ သူ႔အႀကိဳက္ကိုလည္း ကိုယ္ကအေလးထားတတ္တယ္ဆိုရင္ ဒါဟာေရရွည္သြားမယ့္အတြဲေတြရဲ႕ ပုံစံပါပဲ။ ၂။ သူႀကိဳက္တာေတြ ကိုယ္လိုက္မႀကိဳက္ႏိုင္လည္း ကိစၥမရွိဘူး။ ကိုယ္ႀကိဳက္တာ သူမႀကိဳက္လို႔ သူေရာ၊ သင္ကပါ စိတ္ဆိုးတာမ်ိဳးေတြ မရွိဘူး။ ျပသနာမျဖစ္ဘူး။ လက္ခံနားလည္ေပးတတ္တာမ်ိဳးကလည္း ႏွစ္ဦးသားၿမဲေစမယ့္ အခ်က္ပါပဲ။ ၃။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မေျပာဖူးတဲ့ သင့္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြ သူ႔ကိုေျပာျပတတ္တယ္။ အရင္တုန္းက ထားခဲ့၊ တြဲခဲ့ဖူးတဲ့ … Read more
မိန္းကေလးေတြဟာ ခ်စ္မိၿပီဆိုရင္ သိပ္ကို သတၱိရွိၾကပါတယ္ (ဘာလို ့လဲဆိုရင္…) ဒီပုံေလးက လြန္ခဲ့တဲ့ တႏွစ္က fb ေပၚမွာ ေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ပုံေလး။သေဘာက်လို႔ သိမ္းထားရင္း အမွတ္တမဲ့ ျပန္ေတြ႕တာ ေကာင္ေလး လက္ကို ဆြဲၿပီး ခုန္ကူးေနတဲ့ မိန္းမငယ္ေလးရဲ႕ မ်က္နာမွာ ယုံၾကည္ျခင္းေတြ ,ခ်စ္ျခင္းေတြ , ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းေတြ ရွိတယ္။ ေဘးက ျမင္တဲ့သူေတြက ျပဳတ္က်မလား စိုးရိမ္ၾကတယ္ ငါသာဆို မကူးရဲဘူး ေျပာခ်င္ ေျပာၾကမယ္။ဒါေပမဲ့ ဒီမိန္းကေလးကေတာ့ သူ႔ခ်စ္သူကို ယုံၾကည္ အားကိုးစိတ္ေတြနဲ႔ သတၱိအျပည့္ ရွိေနပုံပါပဲ ထြက္ခါနီး သဘ္ောေပၚ သတၱိအျပည့္နဲ႔ ခုန္ကူးတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ စာမဖြဲ႕ပါဘူး။ ဘဝမွာ ခ်စ္သူကို ယုံၾကည္အားကိုး စိတ္အျပည့္နဲ႔ သူ႔လက္ကို ၿမဲၿမဲဆြဲလို႔ အိမ္ေထာင္ေရးထဲ ခုန္ကူးခဲ့ၾကတဲ့ … Read more
မိန္းမ ေတြ ေဖာက္ျပန္ ရတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား….
မိန္းမ ေတြ ေဖာက္ျပန္ ရတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား လူေတြေျပာေျပာေနတာ ေယာက်္ား ေတြက သစၥာ မရွိဘူး၊ ေဆာ္ တကာ နဲ့ပတ္အိပ္ခ်င္ေနတယ္ ေဖာက္ျပန္တယ္ဆိုုတာေတြပါ။ မိန္းမေတြ (…..)ကိစၥေၾကာင့္ ေဖာက္ျပန္တာနည္္းျပီး …. သူတိုု့လိုုခ်င္တာက ကိုုယ့္အေပၚ သစၥာရွိမယ့္ေယာက်္ား နဲ့ သူတိုု့ ဘ၀ဖူလံုုမႈရွိေအာင္ ပူပန္စရာမရွိေအာင္ထားနိုုင္တဲ့ ေယာက်္ား လုုိ့ေျပာေနၾကပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ေကာလဟာလ သက္သက္ေတြပါ။ ခုုတေလာ ေရပန္းစားေနတဲ့ ေယာက်္ားေလး ေတြပဲ နွိပ္တဲ့ အႏွိပ္ခန္းေတြ ဘယ္သူေတြသြားေနတယ္ထင္သလဲ။ ဘာေတြသြားျပီး ဘာေတြလုုပ္ေနတယ္ထင္သလဲ။ ေဖာက္ျပန္တာ မိန္းမ . ေယာက်္ားမေရြးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေယာက်္ား ေတြ ေဖာက္ျပန္ရတဲ့ အေၾကာင္းနဲ့ မိန္းမ ေတြ ေဖာက္ျပန္ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ကြဲျပားေနပါတယ္။ ခုုဒီတစ္ခါ မိန္းမ ေတြ … Read more
မန္တလေးသားတွေ သတိမမူခဲ့ကြတဲ့ ဈေးချိုအနောက်နားက ဆင်နဲ့ မိကျောင်းတံတား တို့ရာဇဝင်အကြောင်း
မန္တလေးသားတွေ သတိမမူခဲ့ကြတဲ့ ဈေးချိုအနောက်နားက ဆင်နဲ့ မိကျောင်းတံတား တို့ရာဇဝင်အကြောင်း မန္တလေး ဈေးချိုတော်ကြီး အနောက်နားတွင် ဆင်နှစ်ကောင် နှင့် မိကျောင်း နှစ်ကောင်ရှိတာ နှောင်းခေတ် မန္တလေးသားတွေ သတိမမူခဲ့ကြပေ။ တကယ်တော့ ထိုဆင်နှင့် မိကျောင်းကြီးတွေက မန္တလေးမြို့ မတည်ခင်ကတည်းက ရှိနေခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုအခါ သူတို့ သက်တမ်းက နှစ် ၁၇၀ကျော်ပြီပေါ့။ ဆင်တံတား ဆင်တံတားဟူသည် ဈေးချိုတော်ကြီး အနောက်ဘက် ၈၆လမ်း ၂၇လမ်းနှင့် ၂၈လမ်းကြားရှိ အုတ်အင်္ဂတေဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော ဆင်ရုပ်ကြီး နှစ်ကောင်ရှိရာ အုတ်တံတားကြီးဖြစ်သည်။ အဆိုပါအုတ်တံတားကြီးက အိမ်တော်ရာဘုရား အရှေ့မုခ်အထိ ရှည်လျားသည်။ အိမ်တော်ရာဘုရားကို မန္တလေးမြို့တည်၊ နန်းတည်နှစ်မတိုင်မီ ၁၂ဝ၉ ခုနှစ်တွင် ပုဂံမင်းက သူ၏အိမ်တော်နေရာတွင် တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆင်တံတားမှာ အိမ်တော်ရာ စေတီတော်ကြီးပြီးမှ … Read more
တင်းတိပ်၊ ဝက်ခြံ၊ မှဲ့ခြောက်တွေကို အရှင်းပျောက်ကင်းသွားစေမယ့် ကြက်သွန်နီ……
တင်းတိပ်၊ ဝက်ခြံ၊ မှဲ့ခြောက်တွေကို အရှင်းပျောက်ကင်းသွားစေမယ့် ကြက်သွန်နီ ကြက်သွန်နီက ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုတယ် အလှအပအတွက် ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာကို စာဖတ်သူ သိပြီးနေလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ကြက်သွန်နီကို ရက်ပေါင်း ၄၀ (၁ လကျော်) အသုံးပြုပေးလိုက်ရုံနဲ့ မျက်နှာပေါ်က မလိုအပ်တဲ့ တင်းတိတ်၊ ဝက်ခြံနဲ့ မှဲ့တွေကို ပျောက်ကင်းသွားစေမှာပါ။ တင်းတိတ် မျက်နှာပေါ်မှာ တင်းတိတ်များနေတဲ့ သူတွေအတွက် ကြက်သွန်နီက ကုစားပေးနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ ကြက်သွန်နီအရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း သံပုယိုရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းပါ။ အဲဒီအရည်နှစ်မျိုးကိုရောပြီး ဝါဂွမ်းစနဲ့ တင်းတိတ်ရှိတဲ့နေရာမှာ လိမ်းပေးပါ။ အဲဒီလိုမလိမ်းခင် မျက်နှာသေချာသစ်ပေးပြီးသား ဖြစ်နေရပါ့မယ်။ အဲဒီနောက် မိနစ် ၂၀ လောက်ထားပြီး ရေနွေးနဲ့ မျက်နှာသစ်ချပါ။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း … Read more
ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီးကိုက္ခဲ့တဲ့သြား ဒီေဆးနည္းနဲ႔ မွပဲ သက္သာေတာ့တယ္……..
နှစ်နဲ့ချီပြီးကိုက်ခဲ့တဲ့သွား ဒီဆေးနည်းနဲ့ မှပဲ သက်သာတော့တယ် ကြိုတင်ဝန်ခံပါရစေ။ကျုပ်က ဆရာဝန်မဟုတ်ဘူး။ဝေတနာရှင်ဗျ။ကိုယ့်ရောဂါ ကိုယ့်ဝေတနာကို ကိုယ့်ဖာသာ မှန်းကု ရမ်းကု ဒေါက်တာရမ်းကုလုပ်ရင်းရရှိလာတဲ့အကျိုးကို မျှဝေလိုက်တာ။ ဒီလိုဗျ…၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ကျုပ်အံသွားတစ်ချောင်းလှုတ်ပြီး မခံမရပ်ကိုက်လွန်းလို့ ဆရာဝန်သွားပြ လိုက်တယ် ။ ဆရာဝန်ကသွားရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတော့ မနုတ်စေချင်ဘူး စားဆေးပေးပြီးထိန်းလိုက်တယ်။သက်သာသွားတယ်။ဒါပေမယ့် သွားရဲ့ဘေးမှာဖုကလေးလိုဖြစ်ပြီးပြီတည်လာတယ်။ ဆရာဝန်ထပ်ပြ ဆေးထပ်ပေး ဒီလိုနဲ့ပဲသံသရာလည်နေတာပေါ့။ပြီတည်တဲ့အခါ သွားဖုံးတင်းပြီး နေထိုင်ရခက်ပေမယ့်ညှစ်ထုတ်လိုက်လို့ပြီထွက်သွားရင် တစ်ပါတ်လောက်နေထိုင်လို့ကောင်းသွားပြန်ရော။ ပြီးရင်ပြန်ထွက်။ဆေးကတော့ မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ်နေ့တိုင်းသောက်လာလိုက်တာ ၂၀၁ရမှ၂၀၁၉ခုနှစ်ခုချိန်ထိပဲ။နှစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်။ နှစ်ချီကြာလာတော့ ကင်ဆာဘာညာလန့်လာင်္ပြီလေ။ရန်ကုန်ရောက်တော့ လှည်းတန်းသွားဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်နဲ့ဆက်ပြတယ်။ ဆရာဝန်က ဓါတ်မှန်ရိုက်စစ်ဆေး အဖြေက ကင်ဆာမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ စိတ်အေးပြီမို့ဆက်ကုပေါ့။သက်သာသလိုရှိပေမယ့် အနာပြီထွက်တာတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ။ တင်းပြီလေ။ လူကခတ်ရွတ်ရွတ်ဆိုတော့တွေ့သမျှ လမ်းဘေးအရွက်တွေခူး အရည်ထွက်အောင်ကြိတ် အနာထဲထည့်ပေါ့။တမာရွက်တွေဝါး။ တမာခေါက်ငုံ။ဆားရေငုံ မရပါဘူး။တစ်နေ့ ဖုန်းပွတ်ရင်းကျောက်ချဉ်အာနိသင်အကြောင်းပင်စိမ်းရွက်နဲ့ သံပုရာသီးအကြောင်းရေး ထားတာလေးတွေ့လို့ ဖတ်ကြည့်ရင်းအကြံပေါ်လာတာနဲ့ထုံးစံအတိုင်း … Read more